Faahfaahin Laga Helayo Qaraxa Lala Beegsaday Madaxweynaha Zimbabwe – Bogga Calamada.com
Faahfaahin Laga Helayo Qaraxa Lala Beegsaday Madaxweynaha Zimbabwe
Wararka ka imaanayo wadanka Zimbabwe oo kamid ah wadamada dhacaa koofurta qaarada Africa ayaa sheegaya in Madaxweynaha cusub ee dalkaasi Emerson Mnangagw uu si dirqi ah kaga badbaaday isku dil dil oo lala damacsana.
Madaxweyne Mnangagwe ayaa xiliga uu ka badbaadayay isku dayga dilka ah ku sugna garoon lagu ciyaaro kubada cagta oo ku yaala Magaalada Bulawaayo oo ah magaalada labaad ee ugu weyn wadanka Zimbabwe, waxa uuna kula hadlayey kumanaan dad ah oo isugu soo baxay garoonka.
Marki uu dhameystay khudbadi u jeedinayey oo uu damcay inuu ka dhaqaaqo fagaaraha ayaa lala beegsaday Bomb gacmeed laga soo tuuray meel aan sidaa kaga fogen halkii uu kasoo dhaqaaqay, taas oo ku dhacday meel ujirta wax ka yar 1 Mitr oo toos ah.
Video lagu faafiyey baraha internetka oo ay duubeen kooxo saxafiyiin ah oo madaxweynaha la socday ayaa laga arki arkaa, isaga oo sii dhaqaaaqaya iyo bambka oo ka imaanaya dhankiisa bidix, ilbiriqsiyo gudahoodna ku qarxaya.
Tiro dad ah oo la socday madaxweyne Mwangagwe oo ay kujiraan ku xigeenadiisa, waziiro dowlada katirsan iyo ilaaladiisa ayaa ku dhaawacmay Bomb gacmeedkan halka tiro kale oo dad ahna ay ku dhinteen.
War qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska Madaxweynaha Zimbabwe ayaa lagu sheegay in Constantino Chiwenga iyo Kembo Mohadi oo kala ah labadiisa madaxweyne ku xigeen iyo waziir dowlada katirsan ay ku dhaawacmeen weerarki lala damacsana in lagu khaarijiyo, isagoona ku sifeeyey weerarka mid fulaynimo ah.
Manangagwa ayaa sheegay in qaraaxa uu ka dhacay meel dhowr Cent mitr ujirto halkii uu marayey, balse ajashiisa aysan galin, isku dayada noocaan ahna ay yihiin kuwa agtiisa caadi ah oo uu lasoo kulmay marar badan.
Waziirka caafimaadka Zimbabwe oo dhankiisa hadlay ayaa warbaahinta u sheegay in kudhawaad 45 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaas qaraxa ahaa, kuwaas oo qaar kamid ah xaaladoooda ay liidato, sidoo kalena ay jiraan dad ku dhintay weerarka oo uusan faafin tiradooda.
Dadka ku dhaawacmay qaraxa ayaa u badnaa masuuliyiin dowlada katirsan, kuwaas oo ka shaqeynayey xafiiska madaxweynaha iyo qaar katirsan gudiga qaabilsan abaabulka doorashada la filayo inay wadankaas ka dhacdo 30ka July ee nagusoo fool leh.
Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee wadanka Zimbabwe ayay dhaawacyadu kasoo gaareen dhanka lugaha, maadama ay bambadu ku qaraxday hoostiisa, waxaana la dhigay isbitaal caafimaad oo iminka xaaladiisa lagula tacaalayo, halka maxaweyne ku xigeenka labaad iyo xaaskiisa ay dhaacawyo soo gaareen, kuwaas oo sawiradooda lagu faafiyey baraha bulshada xili uu booqanayey Emerson Mwangagwe.
Madaxweynaha Emerson waxa uu abaabul xoogan ugu jiraa sidii uu ugu guuleysan lahaa doorashada dhici doonta 30 julay, xiliga qaraxa lala beegsanayana waxa uu kala hadlay dadka reer Zimbabwe qorshayaashiisa Mustaqbalka, si gaar ahna goobta waxa uu kula hadlay taagerayaasha xizbiga talada wadanka haya ee ZANU PF.
Warbaahinta caalamka ayaa si aad ah u hadal heyso arinkan ilaa hadana lama oga cida kadanbeyso weerarka qorsheysan ee looga takhalusi lahaa madaxweyne emerson Mwangagwe, oo xafiiska madaxweynaha la wareegay 24 Nov sanadi 2017ka.
Mwangagwe ayaa xilka madaxtinimada kala wareegay Madaxweynihi kaligiis taliska ahaa ee isaga ka horeeyey Robert Mugabe oo talada wadanka Zimbabwe xoog kusoo haystay 38dii sano ee lasoo dhafay, balse markii danbe si qasab ah xilka looga riday, kadib markii Mwangagwe iyo asxaabtiisa ay soo abaabuleen af gambit military oo si heer sare ah loo soo abaabulay.
Arintaan ayaa kusoo aadeysa xilli maalinki shalay ahaa sidaan oo kale raisal wazaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed uu isna ka badbaaday isku day dil oo lala damacsana kaas oo ilaa hada aan la garaneyn cida sida rasmiga ah kaga danbeyso.
Abey axmed ayaa isna lagu tuuray Bamb gacmeed xilli uu ka qeyb qaadanayey isku soo bax weyn oo ka dhacay fagaaraha Meskel Square eek u yaala caasimada wadanka itoobiya ee addis Ababa, qaraxaas oo ay ku dhinteen ilaa 5 ruux ayna ku dhaawacmeen dad tiradooda ay gaareyso ilaa 165 kale.